Ny tafika karana mpandeha tsy ara-dalàna dia misidina vonjy maika any Bulgaria any Bulgaria
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Bulgaria » Ny tafika karana mpandeha tsy ara-dalàna dia misidina vonjy maika any Bulgaria any Bulgaria
Ny sidina Air France avy any Paris mankany New Delhi dia mitodika any amin'ny seranam-piaramanidina renivohitra BulgariaRow
Ny sidina Air France avy any Paris mankany New Delhi dia mitodika any amin'ny seranam-piaramanidina renivohitra Bulgaria
Ny mpandeha Rowdy dia voarohirohy ho tandindomin-doza ny fiarovana ny sidina
Nanafika ny mpanamory fiaramanidina ilay mpandeha ary nibolisatra teo am-baravaran'ny fiaramanidina
Raha ny filazan'ny tompon'andraikitra Bulgarianina, ny fiaramanidina mpandeha frantsay dia voatery nanao fiakarana maika tany amin'ny seranam-piaramanidin'i Sofia any Bulgaria.
An Air France Ny sidina an-dàlana avy any Paris mankany New Delhi dia tsy maintsy navily lalana nankany amin'ny seranam-piaramanidina Bulgaria noho ny mpandeha tsy voafehy tao anatiny.
Ny mpandeha mpanakorontana, teratany karana iray, dia nanomboka nanao zavatra tsy nety taoriana kelin'ilay fiaingany, nifamaly tamin'ny mpandeha hafa, nanafika mpiambina sidina iray ary nidaroka varavaram-baravarana, hoy ny tompon'andraikitra ao amin'ny National Bulgarian National Investigation Agency.
Ny fihetsika mahery setra nataon'ny mpandeha dia nanery ny kapitenin'ny fiaramanidina hangataka fidinana maika any amin'ny seranam-piaramanidina renivohitra Bulgaria. Ilay rangahy izay tsy naseho ny anarany dia nesorina tamin'ny fiaramanidina ary voarohirohy ho tandindomin-doza ny fiarovana ny sidina. Raha voaheloka izy, dia higadra 10 taona an-tranomaizina.
Taty aoriana, nanohy ny diany soa aman-tsara tany New Delhi, India ilay fiaramanidina.
Mamatonalina manatona fiaramanidina: Iza no hanjary voatavo?